राजनीति Archives - News36media
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सरकारबाट बिदा हुँदै, निकटस्थसँग पोखे गुनासो
August 23, 2020 August 23, 2020 News36mediaLeaveaComment on अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सरकारबाट बिदा हुँदै, निकटस्थसँग पोखे गुनासो
काठमाण्डौ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा साँढे दुई वर्ष मन्त्री बनेर सरकारबाट बिदा हुने निश्चित भएको छ । सांसद पदमा नरहेकाले भदौ तेस्रो हप्ताबाट स्वत: पदबाट हट्नेछन । अर्थ सहित सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका डा. खतिवडाले आफू निकटस्थहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा लैजान चाहेपनि पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण त्यो सम्भव नभएकाले अब […]
फेरि बढ्यो सरकार को ऋण, एक नेपाली टाउकोमा ४५ हजार ऋण
August 21, 2020 August 21, 2020 News36mediaLeaveaComment on फेरि बढ्यो सरकार को ऋण, एक नेपाली टाउकोमा ४५ हजार ऋण
सरकारको ऋण बढेर लगभग साढे १४ खर्ब पुग्यो। यो वर्ष नेपाल सरकारले कूल ऋण १८ प्रतिशतले बढेर कूल १४ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०७७ को असारसम्म नेपाल सरकारको कूल विदेशी ऋण ८ खर्ब ५ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण २७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड […]
प्रधानमन्त्री ओलीको बैंक खातामा कसले हा’ल्यो ६५ करोड रुपैयाँ?
July 14, 2020 July 14, 2020 News36mediaLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीको बैंक खातामा कसले हा’ल्यो ६५ करोड रुपैयाँ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले विवादै विवादले घेरीएका छन् । आफनै पार्टीका मुख्य नेताहरुले राजिनामा मागिरहेका छन् भने भारतीय मिडियाले उनलाई तारो बनाइरहेका छन् । ओलीलाई आफ्नै बोलीले विवादमा ल्याएको छ । मदन भण्डारी स्मृती कार्यक्रममा आफुलाई प्रधानमन्त्रीवाट हटाउन भारतीय अधिकारीसंग होटलमा बैठक बसेको भन्ने अभिब्यक्ति पछि विवादीत बनेका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीका मुख्य […]
June 12, 2020 News36mediaLeaveaComment on सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि भर्खरै सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा अब के होला ?(भिडियो हेर्नुहोस)
गृह मन्त्रालयले बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । केही दिन अगाडिदेखि विभिन्न बहाना र माग राखेर अनावश्यक भीडभाड भइरहेको भन्दै त्यस्तो काम रोक्न मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पु¥याउने जो कोहीलाई पनि […]
संसदमा पहिलो पल्ट उठ्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तलब कटौतीको माग (भिडियो)
June 1, 2020 June 1, 2020 News36mediaLeaveaComment on संसदमा पहिलो पल्ट उठ्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तलब कटौतीको माग (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि तलब कटौती गर्न माग गरेकी छिन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि बोल्दै सांसद संग्रौलाले कर्मचारीको भत्ता काटिने तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्य ब्यक्तिहरुको तलब काट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले बजेटले विभेद गरेको बताउँदै भनिन्– ‘हामीले बजेटमा मितब्ययितता गरेको […]
यो घडीमापनि डा. भट्टराई भारतको पक्षमा बोल्न छोडेनन् : आज दिए झनै विवादित अभिव्यक्ति
May 21, 2020 May 21, 2020 News36mediaLeaveaComment on यो घडीमापनि डा. भट्टराई भारतको पक्षमा बोल्न छोडेनन् : आज दिए झनै विवादित अभिव्यक्ति
काठमाडौ । अहिले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल सरकारले भारतले कब्जा गरेको आफ्नो भुमि (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) सहितको भुभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालीहरु खुःशी भएका छन् । तर नेपालमा कतिपयले सरकारको यस कामलाई सस्तो प्रचार भन्दै आएका छन् । यो भिडमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई एक विवादित बयान जारी गरेका […]
भारतीय मिडियालाई नेता रिजालले अहिले सम्मकै यस्तो कडा जवाफ दिएपछि सामाजिक सन्जाल तात्यो !
May 21, 2020 May 21, 2020 News36mediaLeaveaComment on भारतीय मिडियालाई नेता रिजालले अहिले सम्मकै यस्तो कडा जवाफ दिएपछि सामाजिक सन्जाल तात्यो !
काठमाडौँ : संघीय सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारसँग विभिन्न विमति भए पनि सिमानाको विषयमा हाल सरकारले लिएको अडानको पक्षमा आफूहरु पनि उभिएको बताएका छन् । नेता रिजालले भारतीय च्यानल ‘रिपब्लिक टेलिभिजन’मा ‘दि डिबेट’ कार्यक्रममा यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । भारतमा संस्थापन पक्षधरको रुपमा चिनिएका पत्रकार अर्नव गोस्वामीसँगको अन्तर्वार्तामा रिजालसँगै नेपाली दुई पत्रकार […]
May 4, 2020 May 4, 2020 News36mediaLeaveaComment on बाबुरामलाइ लाग्यो गम्भीर आरोप, अब जेल जान सक्ने !
एजेन्सी ! प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्रनाथ खनाल र सहयोगी नवीन बस्नेतले पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संयुक्त उजूरी दर्ता गराउनु्भएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा भट्टराईले सांसद अ’पहरणको आरोप लगाएर आफूहरुको मानवाधिकार हनन एवं मानहानि गरेको जनाउँदै उहाँहरुले आज आयोग पुगेर डा भट्टराईविरुद्ध […]
‘मलाई प्रधानमन्त्रीका मान्छेले ध’म्की दिए’
May 1, 2020 May 1, 2020 News36mediaLeaveaComment on ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका मान्छेले ध’म्की दिए’
म राष्ट्रिय सभाको सांसद हो,अहिले लकडाउनले गर्दा लुभुमा रहेको घरमै बसिरहेकी छु। लकडाउनमा घर बसिरहेको बेलामा केपी ग्रुपका (प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली)धेरैको फोन आयो। तर उनीहरु धेरैले केही भनेका थिएनन्, खाली हस्ताक्षर गर्न मात्रै बालुवाटार जानु पर्यो भनेका थिए। आज ४ बजेर ४ मिनेटमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य गौरी ओलीको फोन आयो।उनी प्रधानमन्त्री […]
द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनालाई माफी दिन नसकिने सर्वोच्चको ठहरपछि पूर्वमाओवादीमा हलचल पुरा पढ्नुहोस…
April 30, 2020 April 30, 2020 News36mediaLeaveaComment on द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनालाई माफी दिन नसकिने सर्वोच्चको ठहरपछि पूर्वमाओवादीमा हलचल पुरा पढ्नुहोस…
काठमाडौं, द्व’न्द्वकालमा भएका ग’म्भीर अ’पराधका घ’टनालाई मा’फी दिन नसकिने भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फै’सलालाई स’दर गरेपछि पूर्वमाओवादी खे’मामा ह’लचल मच्चिएको छ ।तत्कालीन माओवादीका नेताहरु, नेतृत्वकर्ता र शाही सेनाका अधिकृतमाथि द्व’न्द्वककालमा लागेका ग’म्भीर अ’पराधमा अब अदालतले नै छि’नोफानो गर्ने भएपछि पूर्वमाओवादीका नेताहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।वैशाख १४ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्णइजलासले द्व’न्द्वकालमा भएका ग’म्भीर […]